एप्पल यस वर्ष इन्द्रेणी लोगो मा फर्कन सक्छ क्रिएटिव अनलाइन
एप्पल तपाइँको भावनाहरु र भावनाहरु मा खेल्न बहुरंगी लोगो फिर्ता ल्याउन सक्छ
मानुएल रामीरेज | | सामान्य, धेरै
एप्पल यसको एक उत्तम कार्ड संग खेल्न सक्छ: तपाईंको नयाँ उत्पादहरूका लागि तपाईंको इन्द्रेणी लोगो फिर्ता ल्याउनुहोस्। र यदि तपाईं त्यो लोगो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा ब्रान्डका धेरै फ्यानहरू उनीहरूको नयाँ टेक्नोलोजिकल उपकरण त्यो आइकनिक लोगोको साथ लिन चाहन्छन्।
यी दिनहरू अघि एउटा अफवाह छ कि एप्पल म यसको इन्द्रेणीको साथ काटिएको स्याउ फिर्ता लिन सक्छु तपाईंको आईफोन, आईप्याड र अधिक उत्पादनहरूका लागि। र सत्य यो हो कि यस समयमा यो खराब हुदैन ती प्रतिस्पर्धा को ठूलो धक्का अघि ती Huawei र सामसु। आफ्नो काम गरिरहेको संग।
El १ 1977 1999ic देखि १ XNUMX XNUMX। सम्ममा एप्पलको बहुरंगी लोगो उनीहरूको लायक थियो। म त्यो एक रंगको लोगो बदल्न फिर्ता आउनेछु। खेल संसारका लाखौं प्रशंसकहरूको भावनाहरू र सम्झनाहरूसँग हुन्थ्यो।
न त यो पहिलो पटक हुनेछ दशकौं को चिन्ह ऊ आफ्नो सुरुआतमा जान्छ उसको पहिचान सुदृढ पार्न र लोगोको यसमा ठूलो मूल्यको केहि खेल्न। यी ब्रान्डसँग हामीसँग रहेको बॉन्ड उनीहरूसँग हुन सक्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो। हामीले भर्खरका हप्ताहरूमा पिज्जा हटमा यो देख्यौंत्यसैले बहु रंगीन एप्पल लोगो आफैंमा एक ठूलो प्रस्ताव र विचार हो।
यस समाचारको बारेमा हास्यास्पद कुरा यो हो कि लोगोले सक्दछ यसै वर्षमा देखा पर्दछ। त्यसोभए यदि हामी १ 1977 1999, १ 2019 20? को कुरा गर्छौं भने किन २०१ XNUMX होइन? यो लोगो परिवर्तनको बीचको २० वर्षको भिन्नतामा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। त्यसैले यो अफवाहलाई यथार्थ बनाउनको लागि यसलाई थप सुदृढ बनाइएको छ।
नयाँ आईफोन्स, म्याक र आईप्याड उपकरणहरू हुनेछन् जसमा हामीले देख्यौं कि बहुरंगी लोगो जुन हामी साझा गर्छौं यी रेन्डरिंगका अनुसार डरावना लाग्छ। प्रश्न यो हुनेछ, के तपाईं एक नयाँ एप्पल उत्पादन केवल म्याक वा आईफोनको पछाडि त्यो आइकनिक बहुरंगी लोगोको लागि किन्नुहुनेछ?
बाट छविहरू MacRumors.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » एप्पल तपाइँको भावनाहरु र भावनाहरु मा खेल्न बहुरंगी लोगो फिर्ता ल्याउन सक्छ
क्यान्भाको साथ डिजाइन
यदि तपाईं फेसबुकबाट छविहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तिनीहरू ट्र्याकिंग कोडको साथ आउँदछन्